Wararka ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaalkacyo oo ay shalay dagaalada ka dhaceen – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararka ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaalkacyo oo ay shalay dagaalada ka dhaceen
Wararka saakay naga soo gaarayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta xaaladda halkaasi ay tahay mid aan cago badan ku taagneyn, iyadoona ay weli halkaasi ka jirto xiisad colaadeed oo u dhaxeeysa ciidamada kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland.
Ciidamada Galmudug iyo Puntland oo maalmihii ugu dambeysay isku hor-fadhiya galbeedka Gaalkacyo, ayaa maalintii shalay ahayd halkaasi ku dhexmaray iska hor-imaad kooban oo ka dhashay dhimashada 2 qof iyo sidoo kale dhaawaca seddax qof kale.
Dhaq-dhaqaaqii ganacsi iyo isku socodka gaadiidka ee ka jiray magaalada Gaalkacyo, ayaa lasoo sheegayaa inay maanta xiran yihiin, iyadoona inta badan dadka ku nool magaaladaasi ay isaga barakaceen guryahooda ku yaalay halkaas.
Dhinaca kale, waxaa soo baxaya baaqyo isdaba-joog ah oo ay jeedinayaan dowladda federaalka Soomaaliya, beesha caalamka iyo waxgaradka gobolka Mudug, kuwaas oo ku baaqaya in xiisadda colaadeed ee u dhaxeeyso labadaasi dhinac la joojiyo, islamarkaana wixii khilaaf ah lagu xaliyo miiska wada-hadalka.
Ilaa iyo haatan ma jirto wax heshiis muuqda oo ay labadaasi dhinac ka gaareen dagaaladaan mudooyinkii ugu dambeeysay sida weyn ugu soo noq-noqday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.